Shwe Mandalar Express (ရွှေမန္တလာ အဝေးပြေးကားအသင်း)
သာဓု ခေါကြဖို့ရွှေမန္တလာမိသားစုကထိန်
ကထိန် အခါ ကျရောက်လာတာနဲ့ အမျှ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းဟာ ကထိန်ကုသိုလ်ပွဲများ ကျင်းပတာ ဟာ မွန်မြတ်လှပါတယ်။ အခု
ရွှေမန္တလာ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားအသင်းက လည်း တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ မှာ ရန်ကုန်မြို့ အမှတ် (၃) လက်ဆုံ အနီးရှိ
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ကထိန်သင်္ကန်း လှူပြီး ဒါနလုပ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။
"ကထိန်ရာသီဆိုတော့ဗျာ ကထိန်အလှူလေးကို ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ရတာပေါ့။ အခု ကျွန်တော်တို့ကထိန်အလှူရဲ့ 
အဓိက ရည်ရွယ်ချက်လေးကတော့ဗျာ ချို့ ယွင်းနေတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို လိုက်ရှာပြီး လှူဒါန်းမယ်။ အခု
ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းလေးက နာဂစ်ကတည်းက ဒဏ်ခံထားရတဲ့ ကျောင်းလေးပါ။ အရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ ဒီနားက
ရပ်ကွက်လုပ်တဲ့ ရပ်ကွက်ကထိန်တွေလောက်ဘဲ ရှိတာ။ အခု ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီလို လိုအပ်နေတဲ့
ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကို လှူရတာ အများကြီး ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ အခုဆို ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တလာ ကားအသင်းက
ကထိန်အလှူလုပ်တဲ့ အပြင် နာဂစ်က ဒဏ်ခံထားရတဲ့ မပြုပြင်ရသေးတဲ့ ဓမ္မာရုံကိုပါ ပြုပြင်ဖို့အလှူငွေတစ်ချို့ 
မတ်တည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကားအသင်းက ကထိန်အလှူကို ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ကုသိုလ်အပြည့်ရစေဖို
့ကထိန်မတိုင်ခင် သုံးလေး လကတည်းက ကထိန်ကြေးကို ကြိုကောက်ထားတာပါ။ အခုလို လိုအပ်တဲ့
ဘုန်းကြီးကျောင်းမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ နောက်နှစ်တွေများမှာလည်း လှူဒါန်းသွားမှာဖြစ်သလို ကြုံရင်ကြုံသလို
လည်း အလှူဒါနတွေ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။" ဟု ရွှေမန္တလာဂိတ်ပိုင်ရှင်ဦးခင်မောင်လတ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကထိန်နေ့ မှာလည်း ရပ်ကွက်အနီးအနားတစ်ဝိုက်တို့ ကို အကျွေးအမွေးဖြင့် ဧည့်ခံသလို လပြည့်နေ့ ခရီးသွားတဲ့
ခရီးသည်များကိုလည်း ညစာကို ရွှေမန္တလာကားရပ်တဲ့ ထမင်းဆိုင်များမှာ ဧည့်ခံပြီး ကျွေးမွေးခဲ့တယ် လို သိရပါတယ်။
ဂိတ်ဝန်ထမ်း အားလုံးကိုလည်း အပျော်ခရီးစဉ်ဖြင့် ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားကို လိုက်ပို့ ပြီး အနားယူစေခဲ့တယ်လို့ လည်း
နောက်နှစ်ကထိန်မှာလည်း ရွှေမန္တလာမိသားစုကထိန်ကဲ့သို့ အလှူမျိုး များသထက်များလာပါစေဟု ဆုမွန်ကောင်း
Posted by Min Khant at 6:34 AM No comments:
၂၀၁၂ မတ်လ တွင် တိုးချဲ့ မည့် ရွှေမန္တလာ ခရီးသည်ပို့ ဆောင်ရေး ၏ တိုးချဲ့ ခရီးစဉ်များ
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တလာ ခရီးသွားပို့ ဆောင်ရေး ဆိုရင်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏အားပေးမှုနှင့် တောင်းဆိုမှုများကြောင့် ခရီးစဉ်သစ်များကို ၂၀၁၂ မတ်လ မှာဘဲ တိုးချဲ့ ပြေးဆွဲတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ မတ်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် နေပြည်တော်-လာရှိုးခရိးစဉ်ကို စတင်ပြေးဆွဲမှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်-မုံရွာ၊ရန်ကုန်-ပုဂံညောင်ဦး၊ရန်ကုန်-ပခုက္ကူ ခရီးစဉ်သစ်များကိုလည်း မတ်လ အကုန်တွင် စတင်ပြေးဆွဲရန် ရည်ရွယ်ထားပါတယ် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပါရစေခင်ဗျာ။
ရွှေမန္တလာ ခရီးသွားပို့ ဆောင်ရေး သည် လူကြီးမင်းတို့ ခရီးသွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန် Express ကား ကောင်းများ ဖြင့်သာ ပြေးဆွဲခြင်း၊ ယာဉ်မောင်း များသည် Experience နဲ့ ပြည့်စုံခြင်း၊ ရွှေမန္တလာ ၀န်းထမ်းများက ခရီးသွားလူကြီးမင်းတို့ ခရီးစဉ် အဆင်ပြေချောမွေ့ အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း အစရှိသဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ကို အထူးအခြေခံပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ခရီးသွားလူကြီးမင်းတို့ ရဲ့ အကြံဥာဏ်ဝေဖန်မှု များကိုလည်း အစဉ်အမြဲ ဂရုစိုက်လျက်ရှိပြီးအကြံဥာဏ်များ ဆက်လက် ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ ရွှေမန္တလာခရီးသည်ပို့ ဆောင်ရေး အသင်း၏ သတင်းများ၊ဓာတ်ပုံများကို လူမှု ကွန်ယက်တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Shwemandalar Facebook Fan Page (http://www.facebook.com/pages/Shwe-Mandalar-Express/137681869607500) မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းပေးအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Min Khant at 8:38 AM No comments:
2011 ရွှေမန္တလာ၏ ခရီးသည်များအပေါ ထူးခြားသော ၀န်ဆောင်မှု
ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တလာ ခရီးသည် ၀န်ဆောင်မှု ပေးနေတဲ့ ကားအသင်းဟာ အခု ဆိုရင် တစ်ဆင့်ထက် တစ်ဆင့်မြှင့်ပြီး ခရီးသွားသူ တို့ အဆင်ပြေရန် ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ကား upgrade လုပ်တဲ့အနေနဲ့ ယခင်ဂျပန်ကားများကို ထုတ်ပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် Scania New Buses ကို ခရီးသွားသူတို့ နဲ့ ပထမဦးဆုံး ထိတွေ့ ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားသူတို့ ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေဟာ လည်း ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကျေနပ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၁ အကုန်မှာ ကျွန်တော်တို့ နောက်ထပ် Scania Buses အချို့ ဝင်ရောက်လာဦးမှာ ဖြစ်ပြီး ခရီးသွားသူတို့ အဆင့်မြင့်ကား လက်မှတ်ရဖို့ ကြပ်ခဲ့ကြတာကို လျော့နည်းသွားအောင်လည်း ၀ယ်ယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အခု ဒီလထဲမှာလည်း Higer new Bus များကိုလည်း ၀ယ်ယူပြီး ခရီးသွားသူတို့ နဲ့ ထိတွေ့ ခွင့်ပေးဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ကျွန်တော်တို့FB fan Page မှာ တင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားသူတို့ ရဲ့feedback ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အခု email (shwemandalar.express@gmail.com) မှာလည်း service နဲ့ ဆိုင်တဲ့ feedback တစ်ချို့ ကို ရရှိထားပြီး ဒီ feedback များကိုလည်း လေးစားစွာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ Feedback ပေးခဲ့တဲ့ သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်။
Posted by Min Khant at 4:25 AM 1 comment:
ရန်ကုန်မြို့ ရှိ လက်မှတ်အရောင်းငှာနများ
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.........ကျွန်တော်တို့ ရွှေမန္တာလာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ ခရီးသွားလူကြီးမင်းတို့ လက်မှတ်ဝယ်ရ မှအဆင်ပြေစေရန် ရန်ကုန်မြို့ ရှိ လက်မှတ်အရောင်းငှာနများကို ဖော်ပြထားပါတယ်။ နီးစပ်ရာအရောင်းလက်မှတ်ငှာနများမှာ ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးဝင်း၊ မြင်းခြံလမ်း၊ မ/ဥက္ကလာပမြိုနယ်။
ဝ၉-၅ဝ၄၂၆၄၄ ၊ ဝ၁-၇ဝ၁၆၁၅
သမိုင်းလမ်းဆုံ ရတနာလင်းခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဘူတာကြီးရှေ့ အောင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်ခြမ်း
အမှတ်(၁၃)သံလမ်း ၊ (၇)ရက်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်
တိုက်(၁၆ဝ/၁၆၄)၊မြေညီထပ်၊ဗဟိုလမ်း၊အထက(၄)ကျောင်းရှေ့၊ညောင်တုန်းလမ်းထိပ်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်ဝ၁-၅ဝ၅၉၁၉ ၊ ၅၁၁၈၇၅
မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းနျင့် ၉၃-လမ်းနျင့် ၉၄ လမ်းကြား၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်။
သမိုင်းဘူတာရုံလမ်းနှင့် တပင်ရွှေထီးလမ်းထောင့် ၊လှိုင်ဖိနပ်ဆိုင်ဘေး။
.) အိပ်မက်စိမ်းနှင့် Moon Bakeryကြားအမှတ်(၂၃) လှည်းတန်းလမ်းမ၊
.) အောင် (မြင်သာ)
ဆိုင်အမှတ်(၄၃/၄၄)၊စီ-ရုံ၊ မြင်သာဈေး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
(၁) ပါရမီလမ်းမ၊ ရွှေမန်းသူ-ရှမ်းမလေး အဝေးပြေးကားဝင်းရှေ့
(၃) ယုဇနပလာဇာ မြောက်ဘက်ဝင်ပေါက်(၈)ရှေ့၊
၇ဈေးရုံ(၂)မြေညီထပ်၊အပြင်တန်း၊အမှတ်(၁၇၃)၊မြေညီထပ်၊မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်း(အလယ်) ကျောက်တံတားမြို့နယ် ဝ၉-၅၁ဝ၉၆၇၄၊ ၃၈၉၁၈၄
.) Easy Ticket
တိုက် ၁၁၆၄/ အခန်း(၂)၊သမာဓိလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။
အမှတ်(၂၂၅)၊အခန်း(၁၅ဝ၂) အိုလံပစ်တာဝါ၊ ၁၅-လွှာ၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
၁၈/က ဦးဘဟန်လမ်း ၊ ဗိုလ်ကံညွန့်ရပ်ကွက် ၊ သင်္ကန်းကျွန်း
၇ဝ၁၈၅၃၊ဝ၁-၅၁၆၃ဝ၇ ၊ ၅ဝ၅ဝ၇၇ ၊
.) ပြည့်စုံရှင် (အားမာန်ရှင်)
.) New Motion
အမှတ်(၁၁/၁၅)၊ ကန်လမ်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
အမှတ်(၁၇၂-က)၊ ၅/၇၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ထန်းခြောက်ပင်လမ်းဆုံ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။
.) Tun Tun Naing
အမှတ်(၂ဝ၇)၊ ၅-လွှာ၊ ဗျိုင်းရွာမရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။
၁။ အမှတ်(၂၂) ၊ ဗအာင်ဆန်းကွင်းတောင်ဘက်တန်း၊ ဘူတာကြီးရှေ့၊ဂန္ဓမာကုမ္ပဏီဘေး။
၂။ အမှတ်(၁၅)၊ ဗအာင်ဆန်းကွင်းအရှေ့ဘက်တန်း၊အထက်ပန်းဆိုးတန်း။
၃။ အမှတ်(၅၆၉)၊ သမိုင်း(၆)လမ်းထိပ်၊ဘုရင့်နောင်လမ်းဆုံအနီး၊ မရမ်းကုန်း။
၈ မိုင်မှတ်တိုင် ပြည်လမ်း ၊ မြိုင်ဟေဝန်ပန်းခြံ
ဝ၁-၆၆၄၁၆၂ ၊ ၇၃ဝ၁၂၃၆၉ ဝ၉-၅၁ဝ၈၇၇၃
အခန်း(၈)၊ သံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ လှိုင်မြို့နယ်။
အမှတ်(၂၁၆)၊အခန်း(၁)၊ ရန်ရှင်းလမ်း၊၁၂ လုံးတန်းရန်ကင်းမြို့နယ်၊
Posted by Min Khant at 6:41 AM No comments: